အသားအရေ Sensitive ဖြစ်ပြီး ဝက်ခြံအထွက်များသူတွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Blemish cream! | CosmeticMyanmar
Home » Article » အသားအရေ Sensitive ဖြစ်ပြီး ဝက်ခြံအထွက်များသူတွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Blemish cream!
ခြောက်သွေ့ဝက်ခြံထွက်လွယ်ပြီး အသားအရေ Sensitive ဖြစ်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် ပစ္စည်းလေး Blemish cream နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Blemish cream ဟာ အသားအရေပြဿနာရှိသူတွေအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းသစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Blemish cream ဟာ အသားအရေအတွင်းရှိ အဆီထွက်ရာလမ်းကြောင်းများကို ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင် ပြန်လည်နှိုးဆော်ပေးပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝက်ခြံများကို ရပ်တန့်စေပါတယ်။ အသားအရေပေါ်တင်တဲ့အခါ Light Weight ဖြစ်ပြီး အသားအရေထဲလျင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်သွားအောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဝက်ခြံပြင်းပြင်းထန်ထန် ထွက်ပေါ်တတ်တဲ့အသားအရေတိုင်းသုံးစွဲရန်သင့်တော်ပါတယ်။ နေ့အချိန်မှာသာမက ညအချိန်မှာပါ သုံစွဲနေကျ Skin care ကိုပုံမှန်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆီထုတ်လုပ်ခြင်းကို ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည် လည်ပတ်စေနိုင်ပေမဲ့ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေမျိုးတော့ ဖြစ်မလာစေနိုင်ပါဘူး။
ဒီ Blemish cream လေးကိုအသုံးမပြုခင် မျက်နှာကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောထားသင့်ပါတယ်။ ဝက်ခြံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာတဝိုက်ကို အဓိကထားပြီး တနေ့သုံးကြိမ်ခန့်ပါးပါးလေးလူးပေးပါ။ အကယ်၍ ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ပုံမှန်အသုံးပြုပေးပါ။ တဖြည်းဖြည်း ဝက်ခြံ ခြောက်လာပြီး ကွာကျလာတဲ့အခါ တနေ့တကြိမ်ခန့်သာပုံမှန်လူးပေးပါ။
အသားအရေ Sensitive ဖြစ်သူတွေအသုံးပြုတဲ့အခါ တနေ့ကို ပါးပါးလေးလေး ၃ ကြိမ်စီ ၃ရက်ခန့် လိမ်းကြည့်ပါ။ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းမှာ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အခါမျိုးမှာ ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ အကယ်၍ ကိုက်ညီပါကပုံမှန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး နေ့အချိန်အသုံးတဲ့အခါ Sunscreen တမျိုးမျိုးနဲ့တွဲဖက်ပြီး အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေကအစ စိတ်ချယုံကြည်စွာသုံးစွဲရန် ညွှန်းနေတဲ့ Cream လေးဖြစ်တာကြောင့် ဝက်ခြံဆိုးဆိုးရွားရွားပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင် Blemish cream လေးကို သတိရလိုက်နော်။
Image Source : slmdskincare.com